Contact Sales: (95)2 30828, (95)2 30829, (95)2 30838,(95)9 977150398, (95)9 977150337
At Ngwe Ye Pale'
Business Philosophy By virtue of our philosophy of doing ethical business with production player for ecofriendly product and that has made possible continuing progess of our company also with the growing prosperity of our nation.
No, 157, 33rd Street, b/t 75th and 76th Street
Chan Aye Thar Zan Tsp ,
Tel : (95)2 30829, (95)2 73941, (95)2 71424, (95)2 60148,(95)2 68192, (95)9 91007169,(95)9 977150398, (95)9 977150337
Fax : (95)2 71424
Naung Cho Township , Northern Shan State , Myanmar
Tel: (95)9 977150294 , (95)9 47234513, (95)9 402598532, (95)9 47328042
ငွေရည်ပုလဲ ဘိလပ်မြေ စက်ရုံသည် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက် ပိုင်း နောင်ချိုမြို့နယ် အတွင်း တည်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ Dry Process နည်းစဉ်သုံး ၊ ငါးဆင့်ကြိုတင်အပူပေး စနစ် ပါဝင်သော လည်ပတ်မီးသင်းဖိုစနစ်ဖြင့် တစ်ရက်လျှင် Clinker တန်( ၁ဝဝဝ ) ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ကုန်ကြမ်း ပစ္စည်းများ ရွေးချယ် စုဆောင်းခြင်း ၊ ထုတ်လုပ်မှု အဆင့်တိုင်းတွင် အရည်အသွေး စစ်ဆေးထိန်းသိမ်းခြင်းများဖြင့် အမြဲတစေ အရည်အသွေး ပြည့် မီသော ဘိလပ်မြေများကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။
CROWN ဘိလပ်မြေသည် အကောင်းစား ကွန်ကရစ်လောင်း Portland Cement ဖြစ်ပါသည်။ ဥရောပ စံချိန်စံညွှန်း EN 197-1 (2000) နှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ပြီး Strength Class 525 (R) ဖြစ်ပါသည်။
ကွန်ကရစ် အားဖြည့်ရမည့် နေရာများဖြစ်သော ဖောင်ဒေး ရှင်းတိုင် ၊ ယက်မ ၊ဆလက် လောင်း သည့် နေရာများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ လုံးချင်းအိမ် ၊ အဆင့်မြင့် ကွန်ဒို တိုက် ၊ လမ်း နှင့် တံတားများတွင် အရည်အသွေး ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဘိလပ်မြေ တစ်အိတ် အလေးချိန်မှာ 50 Kg ဖြစ်ပါသည်။ အရည်အသွေး မြင့်မားစွာ ထုတ်ပိုး ထားခြင်းကြောင့် သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရာတွင် ကြံ့ခိုင်မှုရှိပြီး သိုလှောင်ရာတွင် စိုထိုင်းခြင်း၊ ခဲသွားခြင်း မရှိဘဲကြာရှည်ခံပါသည်။
Humdifier Tower & S.P Boiler
Kiln Head & Kiln Tail
Vertical Coal Mill (HRM 17-19M)
A.Q.C & E.P Room
Boiler Dust Collector & Chimney
Copyright © 2017 Ngwe Yi Pa Le' Mining Co.,Ltd. All Rights Reserved.